Obodo Jedi - WRSP
JEDI KWESỊRỊ EZIOKWU
1977: Star Wars, emesia renamed Agha Star Agha nke Anọ: Olileanya Ọhụrụ, premiered. O mere ka echiche nke Force na Jedi Knights wee merie Oscars isii.
1988: Akụkọ ọdịnala bụ Joseph Campbell gwara Bill Moyers na ya tụlere Star Wars ịghọ akụkọ ifo nke oge a.
1998: edilọ ọrụ Jedi Academy, ebe nrụọrụ weebụ gụnyere nke mbụ mkparịta ụka na ntanetị maka Jedi Realists, bụ Bel Legato tọrọ ntọala.
2001: Onye Nchịkọta Ọnụ ọgụgụ Jedi. Ihe karịrị mmadụ 500,000 jupụtara na "Jedi" dị ka njikọ okpukpe ha na New Zealand, Canada, Great Britain, na Australia.
2001: Jediism: Okpukpe Jedi guzobere site n'aka David Dolan. Ọ bụ isi ndị otu Jediist dị n'ịntanetị ruo 2005.
2002: Nzukọ mba mbụ nke Jedi Community na United States mere.
2005: Rev. John Henry Phelan (aka Nwanna John) guzobere Templelọ Nsọ nke Jedi Order, nke ghọrọ ebe nrụọrụ weebụ Jediist kachasị ahịa.
2007: Daniel Jones guzobere Chọọchị nke Jediism na United Kingdom.
2015: The Jedi Compass: Ọrụ Nchịkọta nke Jedi Community e bipụtara.
2016: Templelọ nsọ nke Jedi Order rịọrọ maka nnabata iwu na United Kingdom dị ka ụlọ ọrụ okpukpe mana ọ jụrụ.
Obodo Jedi bụ ebe okpukpe okpukpe na-adabere na akụkọ (cf Davidsen 2013) dabara na George Lucas ' Star Wars ihe nkiri. Site Star Wars ezigbo ndụ Jedi ejiriwo dị ka Jedi Knights na nkwenye na Force, onye na-abụghị nke onwe ya, ike dị n'eluigwe na Star Wars eluigwe na ala. Nke mbụ Star Wars ihe nkiri sere na 1977, [Foto dị n'aka nri] nakwa n'ajụjụ ọnụ Lucas kwuru na ya "tinyere Force n'ime ihe nkiri ahụ iji kpọte ụfọdụ ụdị ime mmụọ n'ime ndị na-eto eto" (Moyers 1999; cf. Davidsen 2016a: 381- 82). Ọ bụghị ruo na 1995, na Jedi Community malitere ịpụta na online Star Wars arụ ọrụ na-arụ ọrụ. N'oge a otu ìgwè Star Wars ndị na-eme egwuregwu, bụ ndị ga-emesị mepụta aha Jedi Realists maka onwe ha, malitere ikwurịta otú e si etinye echiche nke Jedi Knights na ndụ ha. Ha chọsiri ike ime ka ndị Jedi Knights nke Star Wars na ezigbo ụwa, ebe etiti a na-arụ ọrụ bụ ntọala ụlọ akwụkwọ ntanetị nke ndị mmadụ nwere ike ịmụọ banyere Jedi ethics ma mụta banyere Ike.
Onye mbụ Jedi Realist website nwere ike ịbụ Kharis Nightflyer Jedi Praxeum na Yavin 4 (nke a malitere na Disemba 1995), ma Ụlọ Akwụkwọ Jedi dị na Baa Legato (nke 1998-2003) na-arụsi ọrụ ike, bụ nke gụnyere otu mkparịta ụka na-arụ ụka, bụ ebe mbụ mgbakọ Jedi Realists na oghere dị na Jedi Community n'etiti 1999 na 2002 (Macleod 2008: 16). N'ime mgbalị ha iji mee ka ndụ Jedi gbanwee, Jedi Realists ọ bụghị nanị na ha dabeere na Star Wars ihe nkiri. Ha na-esite n'ike mmụọ nsọ Jedi kwadoro ya Agha Star: Egwuregwu Egwuregwu na site n'aka Kevin J. Anderson's Jedi Academy (1994) nke na-akọwa banyere nlọghachi nke Sky Skyker na Jedi Order na ọzụzụ ya nke ọgbọ ọhụrụ Jedi Knights (nke Davidsen 2017: 12-13). N'ịtụgharị uche n'ihe nketa RPG ha, ọtụtụ n'ime nnukwu ụlọ ọrụ Jedi Realist na mmalite afọ, gụnyere Jedi nke New Narị Afọ Iri (1997-2004), Jedi Creed (1999-2001 na-arụsi ọrụ ike), na Jedi Temple (2000-2009 na-arụ ọrụ), eme ihe n'egwuregwu na iji nlezianya Jedi na saịtị ha (Macleod 2008: 14, 21), ma gburugburu ndị 2000 Jedi Realist dị iche iche malitere ịpụta na kpochapụrụ mmekọrịta ha na ọrụ obodo ahụ n'oge gara aga. Ndị a gụnyere ụlọ nsọ nke Jedi Arts (2000-2005 na-arụsi ọrụ ike) na Òtù Jedi ndị a ma ama (mechara denye JEDI; 2001-2006 arụ ọrụ).
Na 2001, karịa 500,000 ndị nọ na New Zealand, Australia, Canada, na Great Britain jikọtara ha na okpukpe ha dịka "Jedi" na nchịkọta nke mba dịka nzaghachi na ozi mgbasaozi mgbasa ozi nke kesaara tupu nchọpụta ahụ (Porter 2006: 96-98; Possamai 2005: 72-73: Singler 2014: 154; Davidsen 2017 : 15). Ọ bụ ezie na ndị a na-akpọ Jedi Census Ahenomenon malitere site na ndị na-adịghị etinye aka na Jedi Community kwesịrị ekwesị, ọ metụta Jedi Community n'ọtụtụ ụzọ. Ụfọdụ ndị okenye Jedi Realists dị iche iche, tinyere Jedi Creed, gbazere n'ihi esemokwu esemokwu banyere ụzọ e si edozi mgbasa ozi mgbasa ozi na mberede (Davidsen 2017: 14). Otú ọ dị, ihe kasị mkpa bụ na onye Jedi Chenm na-emepụta ọgụgụ na-akpali ndị mmadụ ịchọta ụdị ọhụrụ Jedi dị iche iche bụ ndị na-ezo aka na ha dịka ụka (ọ bụghị dịka agụmakwụkwọ) na ndị òtù ha weere onwe ha na ha bụ ndị na-eso ezi okpukpe, Jediism. Òtù David Dolan Jediism: Okpukpe Jedi bụ ndị mbụ dị otú ahụ. Ọ malitere ịrụ ọrụ na 2006, mana n'etiti ndị na-anọchite anya ya bụ ọtụtụ ndị ọkachamara na Jediist, gụnyere Jedi Sanctuary (2003-2007) na Ụlọ Nzukọ nke Jedi (tọrọ ntọala 2005 site n'aka John Henry Phelan). Ndị ọkachamara Jediist kachasị dị iche iche na-ejikọtaghị Jediism: Jedi Okpukpe bụ Chọọchị Jedi nke dabeere na New Zealand (tọrọ ntọala 2003) na Chọọchị Jedi na Britain (tọrọ ntọala 2007 site na Daniel Jones).
Na narị afọ nke iri abụọ na otu, ọganihu kachasị mkpa na Jedi Community bụ ntụrụndụ nke ìgwè ndị na-ezute na ndụ n'ezie karịa na Intanet. Ndị a dị iche iche gụnyere Chicago Jedi (tọrọ ntọala 2006) na California Jedi (tọrọ ntọala 2012), yana otu ndị dị iche iche n'èzí United States. Na America, ebe ọtụtụ Jedi dị ndụ, a haziri nzukọ otu afọ site na 2002. Nzukọ obodo na nke mba, na-adọta ma Jedi Realists na Jediists, na-akpọsaa na Jedi Community ma ndị otu na-akwado Facebook na otu ebe a na-ezukọta na nchịkọta (Davidsen 2017: 17-18).
Jedi nke ọnyá nile na-ekweta Star Wars bụ isi ha si n'ike mmụọ nsọ, mana ha na-ejidekwa, dịka okwu, nke ahụ Star Wars bụ akụkọ ifo. Nke ahụ bụ ikwu: Jedi anaghị atụle akụkọ akụkọ ma ọ bụ ihe odide nke Star Wars ka ha dị adị, ha anaghịkwa ele George Lucas anya dị ka onye amụma, mana ha na-atụle na ike bụ okwu dị irè maka ikike dị adị, nke dị n'ime ụwa dị adị n'ezie. Ha na-atụlekwa ndị Jedi Knights Star Wars ka ha bụrụ ndị nlereanya nke ụkpụrụ na echiche ha zuru ụwa ọnụ ma baa uru.
Abụọ ọzọ na-esonye àgwà na-eso n'ụzọ ziri ezi si nabata nke Star Wars dị ka ebe Jedi Community si ede ihe. Nke mbụ, ndị òtù Jedi niile gbasoro ụfọdụ nsụgharị nke Jedi Code, nke mbụ e bipụtara na 1987 na Agha Star: Egwuregwu Egwuregwu (Costikyan 1987: 69). Nke a, a na-akpọkarị "Usoro Ọtọdọks," dị ka ndị a:
Enweghị mmetụta ọ bụla, enwere udo.
Enweghị amaghi, e nwere ihe ọmụma.
Enweghị agụụ, enwere obi ebere.
Enweghi onwu, enwere ike.
Nke abụọ Star Warsndi otu di iche iche nke Jedi choputara ihe ndi mmadu ji kwado okwu banyere ihe ndi ozo (na omume oma), karia n'akwukwo ihe omumu na nzoputa. Nkwenye a abughi ihe ozo, ma nke a sitere n'omume nke nkwenkwe okpukpe nke 'nyere' Star Wars akụkọ (cf Davidsen 2016b). N'ezie, na nkuzi nke ndị Jedi Knights na Star Wars anyị na-achọta ịkọwa echiche banyere ịdị adị na ọdịdị nke ike (okpukpe okpukpe), na nkwenkwe yiri nke ahụ na onye ọ bụla nwere mmụọ ma ọ bụ mkpụrụ obi nke ejikọrọ aka na Njikọ ma laghachi 'Netherland of Force' mgbe ọ nwụsịrị (okpukpe ihe omumu). N'ụzọ dị iche, Star Wars Jedi na-agbachi nkịtị n'ihe gbasara akụkọ ntolite ụwa. Ha enweghị ihe ha ga-ekwu banyere etu na ihe kpatara ụwa ji dịrị (usoro iwu), ma ọ bụ banyere ihe gbasara eschatology ma ọ bụ ihe gbasara ọrịa. Jedi n'ime ụwa n'ezie na-agbaso otu okwu ahụ: ha kwenyere na Force ma na-ekwu na mgbe mkpụrụ obi / mmụọ ọ bụla laghachiri ma ọ bụ jikọta ya na ike ụwa. Ha abughi ihe omuma ma obu ozizi ndi ozo, obu ezie na ufodu ndi Jediists ga ekwu na ike nwere ndokwa maka anyi na ihe nile mere maka nzube.
N'ime Jedi Community enwerekwa nkwekọrịta dị ukwuu, na nkwenkwe ndị a na-eche echiche, ememe, na ụdị nhazi. Esemokwu dị na mpaghara ndị a na-emekọtara onwe ha na ibe ha na njirimara onwe onye dịka Jedi Realist na-ahụ maka Jediist. N'ihe banyere ozizi, ọdịiche dị ukwuu n'etiti Jedi Realists na Jediists na-emetuta echiche ha banyere Force, ha "dynamology." Jedi Realists na-ele ike na ike okwu, dịka ikike dị oke mkpa ma dị mkpa ma ọ bụ ike ndụ. Dị ka ihe atụ, Force Academy na Ashla Knights jiri Ụdị na-eme atụmatụ Eastern, dị ka chi na prana, ma hụ ọdịiche dị n'etiti omume ha na chi chi, aikido, na Zen. Ndi otu di iche iche di iche iche, ndi di iche iche, jikọtara ike di iche iche animistic echiche nke Force dị ka onye ọrụ nọọrọ onwe ya nke nwere ike itinye aka na ụwa ma ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịza ekpere.
Ihe ọzọ na-akpata esemokwu ozizi metụtara ihe ndị ọzọ na-akpata karịa Star Wars ihe nkiri nke otu onye nwere ike imata ihe ziri ezi mgbe ị na-etinye nkwenkwe na ememe maka ụzọ Jedi. Otu ogige (m ga-akpọ ha purists) na-arụ ụka na ihe nkiri ahụ kwesịrị ịgbakwunye naanị ihe site na ihe Star Wars Fans na-ezo aka dịka Elu Eluigwe na Ala, dịka akwụkwọ ikikere Star Wars akwụkwọ akụkọ, egwuregwu vidio, na egwuregwu egwuregwu. Ụkpụrụ purist a bụ ụkpụrụ mgbe Jedi Realism si pụta Star Wars arụ ọrụ na-arụ ọrụ. N'ime ọtụtụ iri afọ, Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị mmadụ enwewo mmasị na Jedi Realism na Jediism bụ ndị dị ka Star Wars fim ma ọ bụghị hardcore Star Wars Fans. Maka nke a, ihe ka ọtụtụ Jedi taa, gụnyere ndị Jedi na ọtụtụ Jedi Realists, nwere ike ịkọwa ya dịka ndị ọrụ mmekọrịta, n'echiche na ha na-abata na ma Star Wars na ihe ndi sitere n'okpukpe di iche iche mgbe ha na-aruzi ozizi ha. N'eziokwu, ndị Jedi onwe ha na-ejikarị okwu bụ "syncretism" akọwa ọrụ ha. Ndị Jedi Realist na ndị Jediist jikọtara akwụkwọ afọ ọhụrụ na akwụkwọ Buddhist Western, dị ka Alan Watt's Akwụkwọ: Na-egbochi Ịmara Onye Ị Bụ (1966) na Dan Millman Ụzọ nke Onye Agha Na-eme Udo (1984). Tụkwasị na nke ahụ, ndị na-arụ ọrụ na Jediist na-esite n'aka Iso Ụzọ Kraịst n'ike mmụọ nsọ. Dịka ọmụmaatụ, Ụlọ Nzukọ nke Jedi nyere iwu Jedi Creed nke bụ eziokwu nke otu nke Francis nke Assisi na-ekpe ekpere (Ụzọ nke Jediism 2010: 10). Ọtụtụ ndị ọgụgụ isi na-arụ ọrụ n'ime Jedi Community bipụtara akwụkwọ banyere ụzọ Jedi (lee Davidsen 2017: 25 maka nkọwa), ndị ndú si n'ofe Jedi Community arụkọwokwa ọrụ ọnụ iji bipụtara edemede abụọ, The Great Jedi Holocron (Yaw 2006) na Jedi Compass (Jedi Community 2015).
Okpukpe nke Jedi Knights na Star Wars enweghị ọtụtụ n'ime omume ndị ndị mmadụ na-ejikọta na okpukpe "ezigbo". Na Star Wars ihe nkiri na-enweghị ekpere, nkwenye, àjà, okwu okwu, ma ọ bụ ememe nke ụzọ, ma Jedi (na ihe ndị ọzọ) na-eji ngọzi "May the Force Be With You" dịka ekele ekele ma anyị hụ dị iche iche Jedi Knights na-atụgharị uche (na Darth Vader kwa, o nwere ntụgharị uche nsen). Dị ka o kwesịrị ịdị, Jedi Community anabatala ma ọ bụ mgbaghara (mgbe ụfọdụ, MTFBWY) na ntụgharị uche.
Ọ bụ ezie na ntụgharị uche dị oke mkpa, ihe ka ọtụtụ Jedi na-etinyekwu oge na ihe omume abụọ ọzọ: ịkwado onwe onye na ọrụ obodo. Ụdị Jedi dị mma nke onwe ya na-akọwa ma ọzụzụ anụ ahụ na nke ọgụgụ isi, na ọtụtụ Jedi omume ịgba karat, na-amụ Ike, na-enye aka na mkparịta ụka obodo na usoro Jedi. Tụkwasị na nke a, ndị Jediiki niile (ma ọ bụ naanị ndị Jedi Realists) na-ele ọrụ obodo anya dị ka ihe ngosi nke Jedihood. Ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ Jediist enwewo ọbụna mepere emepe ma ọ bụ obere usoro ọrụ mmemme. Dị ka ihe atụ, Order nke Jedi (Canada), na-etinye ntinye maka enyemaka na mpempe akwụkwọ nchịkọta obodo, ma ọ bụ na-arụ ọrụ, na-ahapụ naanị otu kaadị aka na-enweghị aha na okwu:
E nyere aka inye aka,
onye so na:
Iwu nke Jedi Canada
Ebubere [sic] ịkụziri ụkpụrụ ndị siri ike,
site n'inwe nduzi ezi omume na nduzi oma (nke e kwuru na Vossler 2009: 66).
Ọ bụ ezie na Jedi Realists na Jediists na-ekwusasi ike na ntụgharị uche, mma onwe-ha, na (ruo n'ókè ụfọdụ) ọrụ obodo, naanị ndị Jediists na-achọ ịzụlite omume nile nke okpukpe zuru ezu chọrọ ma na Star Wars enweghị. Na nke ndị otu Jediist nile, Ụlọ Nzukọ nke Jedi Order emeela ka ndị agha zuru oke. E wezụga ememe maka ibido dị ka Knight (nke ndị ọzọ Jedi dị iche iche nwere otu aka), ụlọ nsọ nke Jedi Order kere ememme maka alụmdi na nwunye na olili ozu na maka consecration nke ala na ụlọ nsọ (Ụzọ nke Jediism 2010). Ọzọkwa, dị ka ndị òtù nke a na-akọwa, ụlọ nsọ ahụ na-emepụta "okwu ọ bụla e bipụtara mgbe nile ụbọchị ise ọ bụla, na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-adị n'ime abalị, nke dị na TotJO" (Williams, Miller, na Kitchen 2017: 121). Ọrụ ndị a na-ejedebe na nchịkọta otu nke Jedi Creed (Williams, Miller, na Kitchen 2017: 131). N'akụkọ ihe mere eme nile, ndị òtù ahụ arụ ọrụ n'ime "otu mmasị dị iche iche" ise (oge "ememe" n'oge gara aga) nke mepụtara ememe ndị ọzọ maka ndị na-eme ememe okpukpe dị iche iche. Uzo ise di iche iche nwere uche di iche iche bu ala di nma (ebe a putara Star Wars naanị), Abraham, onye jọgburu onwe ya, Buddha, na Humanist (Ụzọ nke Jediism 2010: 18).
A na-ahazi ìgwè dị iche iche Jedi dịka iwu iwu mmalite ma chọọ ka ụfọdụ ọmụmụ ihe, nkwenye nke nna ukwu, na mgbe ụfọdụ ịga nke ọma na nyocha akwụkwọ tupu onye ọ bụla enwee ike ịga n'ihu na ọkwa zuru oke. A na-akpọkarị ndị na-enweta ọkwa a dịka Jedi Knights. Usoro ihe omumu bu ihe abuo. Nke mbụ, a chọrọ ka ụmụ akwụkwọ na-arụ ọrụ site na usoro ọmụmụ gbasara usoro okpukpe Jedi Knights na Star Wars, akụkọ banyere ụwa Jedi nke ụwa n'ezie, na ihe ndị ọzọ, dị ka akwụkwọ ndị Alan Watts na Joseph Campbell dere. N'oge nke a, ụmụ akwụkwọ na-amụtakwara onwe ha ihe odide nke ozizi ndị isi nke Jedi Community, dị ka "16 Basic Basic" Jedi Kidohdin na Jedi Kidcle nke "Jedi Circle" (Jutt 2012) Jedi Opie Macleod. [Foto na nri] Nke abụọ na-agụnye ọmụmụ ihe n'otu n'otu n'okpuru nduzi nke Master Jedi. Dị ka Star Wars, Jedi Knights (na Jedi na-eburu utu aha ndị yiri ya) nwere ikike ịzụlite ihe ngosi ọhụụ dị ka Knight. Ọganihu na ọkwa nke Knight na-abịa n'ememe nke ndị ọkachamara na-agba nkwa ma na-edozi isi. Ndị Jedi Knights bụ ndị zụlitere ụfọdụ ndị ọzọ Jedi n'ọkwá Knight (atọ n'ime ụlọ nsọ nke Jedi Order, abụọ na Jedi Academy Online) na ndị gosipụtakwara na ha ruru eru n'ụzọ ndị ọzọ, nweta ọkwa nke Jedi Nna ukwu.
Obodo Jedi bụ obodo dị iche iche nke nwere ọtụtụ iwu na isi. Dị ka nke a, Jedi Community enweghị otu onye ndu nwere ike ikwu maka obodo niile, n'agbanyeghị na ọ na-ebute ọtụtụ ndị nwere ọgụgụ isi na-emetụta, gụnyere Jedi Opie Macleod (Jedi Academy Online) na Nwanna John Phelan (Johnlọ Nzukọ nke Jedi Order). N'ụzọ dị oke mkpa, na n'ụzọ dị iche na ọtụtụ mmegharị okpukpe ndị ọzọ, ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ndị isi ọgụgụ isi nke Jedi Community nke gosipụtara nkwupụta na ọmarịcha ọnọdụ mara mma. Ndị isi anaghị ekwu na ha ga-enweta mkpughe ndị ewepụtara site na Force, ma ọ bụ na ha na-ekwu na Force na-enye ha ọgwụgwọ ma ọ bụ ikike ọgụgụ isi karịrị ihe nkezi Jedi nwere ike ịchọrọ. N'ime ndị ndu ejiji ụwa na Jedi Community nwetara ikike na ugwu site na inye aka na mkpokọta kọwaa ihe Jedi bụ, yana site na ime ka mkparịta ụka a na-aga n'ihu dị ka ndị ọchịchị nwere ntụkwasị obi. Eleghi anya enwere ike ichota ndi mmadu n'ime Jedi Community site na nmalite n'ihi na ndi Jedi juputara oru nke ndi mmadu. Star Wars ihe nkiri. N'agbanyeghị ọdịdị dị iche iche nke Jedi Community, a na-akwado mmekọrịta dị iche iche site na mmemme na-ekwenye ekwenye, dị ka nzukọ mba na United States (ebe 2002) na dijitalụ nkeji iri na ise Holocron (ulo oru 2015), nakwa site n'eziokwu na ọtụtụ Jedi bụ ndị otu ìgwè dị n'otu n'otu oge ahụ.
Ọnụ ọgụgụ 2001 gụrụ ọkara nde Jedi, ma ọ siri ike ịkọ mmadụ ole na ole nọ na Jedi Community. Ndị na-eduzi Ụlọ Nzukọ nke Jedi Order na-atụle ọnụ ọgụgụ nke ndị òtù a na-edebanye aha ha na-agbakọta na 2,000, nke ihe karịrị 200 mejupụtara isi ọrụ; n'ụwa nile ha na-atụle ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke Jedi ka ha ghara ịdị elu karịa 4,000-5,000 (Williams, Miller, na Kitchen 2017: 132-33). O doro anya na nke a bụ atụmatụ siri ike, ma ọ dị ka o doro anya na ebe ọnụ ọgụgụ ahụ gụrụ Jedi n'ọtụtụ narị puku, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịtụle ndị ọrụ Jedi Community n'ime ọtụtụ puku na ndị na-ahụ maka ebere na ndị na-agafe agafe site na iri puku kwuru iri puku. Geographically, ọtụtụ Jedi mmiri si United States, United Kingdom, na mba ndị ọzọ na-asụ Bekee, mana enwekwara mpaghara ndị Jedi dị na mpaghara na ndị na-abụghị Anglophone dị ka ihe atụ Denmark na Brazil. Ọtụtụ Jedi bụ ndị ọcha, afọ iri abụọ na iri anọ na iri na anọ (Williams, Miller, na Kitchen 4: 2017), mana ọganihu na ọrụ ndị na-adịghị agafe agafe eme ka Jedi Community ka mma karịa nwanyị.
Ndị niile nọ na Jedi Community kwetara na ụzọ Jedi dị ezigbo njọ, ma enwere nkwekọrịta banyere ajụjụ ahụ ma ndị òtù Jedi, n'ihi nke a, kwesịkwara ịlụ ọgụ maka nkwenye iwu dịka okpukpe. Njirimara iwu bụ ihe bụ isi ebumnobi maka ndị Jediists, ma ndị Jedi Realists jụrụ ọrụ a n'ihi na ha na-atụle ụzọ Jedi iji bụrụ echiche nke ndụ kama ịme okpukpe.
Òtù mbụ Jediist natara ikike iwu kwadoro dị ka okpukpe bụ Ụlọ Nzukọ Jedi, bụ nke e wepụtara dịka ụlọ ọrụ na-abụghị ndị na-akwụ ụgwọ na 501 (c) (3) Ụtụ isi ụtụ isi nke US na steeti Texas nke John Henry Phelan ( aka Brother John) na December 25, 2005 (Singler 2014: 164). N'ịchọ nkwado nke iwu, Phelan si n'ike mmụọ nsọ nke òtù Jediist nke mbụ, Jedi Sanctuary, nke e debara aha dịka otu ọgbakọ n'ime Universal Life Church (nọmba ID 61842) na dịka ndị ahụ nwetara ikike ịtọ ndị ozi na inye BA, MA , na Doctorate Ogo na Nsọ. Site na ịdenye ụlọ nsọ nke Jedi Order dị ka ụlọ ụka na aka ya, Phelan ọ bụghị nanị na ọ nwetara ụtụ isi maka ìgwè ya, kamakwa natara ikike iji dozie ndị ozi nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ndị na-eme ememe alụmdi na nwunye. Ụlọ nsọ ahụ nwekwara ikike inye Onwe ya na nsọpụrụ (Jediism). Ugbua ahu weputara akwukwo di iche iche nke Divinity iji kpoo Knights na Bachelor Degree in Divinity to Knights; Edebere Doctorate nke Divin dị ka ọkwa mmụta (Williams, Miller, na Kitchen 2017: 130-31). N'ịgbaso ihe atụ nke Ụlọ Nzukọ nke Jedi, Order of the Jedi (Canada) na-etinye maka ọnọdụ dị ka òtù okpukpe na-abaghị uru ma nye ya ọnọdụ a na obodo ya na 2009 (McCormick 2012: 178) na na United States na 2012.
N'adịghị ka ụlọ nsọ nke Jedi Order na Order nke Jedi (Canada), a na-akpọ òtù Daniel Jones 'Church of Jediism nke dị na United States dị ka òtù na-abaghị uru (ụlọ ọrụ a kpaara ókè) (Singler 2014: 164). N'ime ụlọ ọrụ Jediist, Chọọchị nke Jediism na-apụtakwa n'ụzọ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, Chọọchị nke Jediism maka ịkwado iwu dị ka okpukpe na-eme na ụdị yiri nke a na-asụ edere na-adabere na ihe mere nke Chọọchị nke Flying Spaghetti Monster. N'adịghị ka ndị Pastafarians na-achọ iyi colander na foto ikike ha na-akwọ ụgbọala, Daniel Jones boro Tesco maka nnukwu ụlọ ahịa maka ịkpa ókè okpukpe mgbe a gwara ya ka ọ na-abanye n'otu n'ime ụlọ ahịa ha (Carter 2009). Ọ bụkwa àgwà nke Church of Jediism's style that launched the website of the organization's website on "May Fourth" 2017, ụbọchị bụ ụbọchị ememme maka Star Wars Fans, ma ọ bụghị ihe kacha mma maka ezumike maka òtù okpukpe dị egwu.
Ntinye aka na uru nke Church of Jediism, nakwa nke Daniel Jones na-eme ka hyperbolic kwuo banyere nha na ọgbọ nke nzukọ ya, akpatawo iwe maka Ụlọ Nzukọ nke Jedi Order na ìgwè ndị yiri nke ahụ na-eche na ha nwere nsogbu na agha ha maka ịbanye n'ime ụlọ okpukpe ndị legit (cf. Singler 2015: 170-71). N'ezie, site n'aka ndị a dị iche iche, a ghaghị ịlụ ọgụ maka nkwalite dịka ezigbo okpukpe na abụọ n'ihu, ma -enweghị Obodo Jedi na n'ime ya. Ọ bụ nnukwu ihe nkwụsịtụ na ụlọ Ụlọ Nzukọ nke Jedi Order maka nkwado gọọmenti dịka òtù ọrụ ebere okpukpe na United Kingdom gbanyụrụ na 2016 n'oge na-enweghị isi na nkwenkwe nke ndị ahụ adịghị oke oke. Otu akụkọ si n'aka onye ọrụ nlekọta ọrụ ebere nke United Kingdom kwuru na
Kọmitii enweghị afọ ojuju na “Ọrụ Live” na weebụsaịtị, okwu okwu ndị e bipụtara na nkwalite ntụgharị uche na-egosi mmekọrịta dị n'etiti ndị na-eso ụzọ okpukperechi na chi, ụkpụrụ ma ọ bụ ihe egosipụtara site na ofufe, nsọpụrụ na nsọpụrụ, asọpụrụ. ịrịọ arịrịọ ma ọ bụ site na okpukpe ma ọ bụ ọrụ okpukpe ọzọ (nke e hotara na Bingham 2016).
Ọchịchị na-ezighị ezi nwere ike ịbụ na eziokwu ahụ bụ na Chọọchị nke Jediism, ọ bụghị ụlọ nsọ nke Jedi Order, bụ ihu ọha nke Jediism na United Kingdom.
Foto #2: Ebe nhazi nke ndị mmadụ n'otu n'otu dị na ndị Jedi obodo na England na Wales, 2001.
Image #3: Foto nke Trout's Jedi Circle: Jedi Philosophy maka Ndụ Kwa .bọchị.
Anderson, Kevin J. 1994. Jedi Academy. Toronto: Akwụkwọ Bantam. (Gụnyere utu aha Search Jedi, Ihe omimi, na Ndị na-akwado ndị agha.)
Bingham, John. 2016. "Akụkọ Ọjọọ Maka Agha Agha Ụwa Na-atụgharị Anya: Ọchịchị Jediism abụghị Ọchịchị." The Daily Telegraph, December 19. Nweta site na http://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/19/bad-news-star-wars-obsessives-jediism-officially-not-religion na 5 April 2017.
Carter, Helen. 2009. "Jedi Okpukpe guzobere na-akpọ Tesco nke ịkpa ókè karịa iwu na Hoods." The Guardian, September 18. Nweta site na https://www.theguardian.com/world/2009/sep/18/jedi-religion-tesco-hood-jones na 5 April 2017.
Costikyan, Greg. 1987. Agha Star: Egwuregwu Egwuregwu. New York: Egwuregwu Egwuregwu West End. Nke abụọ Edition 1992; Nke Abụọ, Nyocha na Ịgbasawanye 1996.
Davidsen, Markus Altena, 2017. "Jedi Community: History and Folklore of a Fiction-based religion." Nduzi ohuru n'ime akwukwo 15: 7-49 (Mbipụta Pụrụ Iche: “Mkpalite Ọha Na eze: Star Wars na Okwu Omenala, ”nke John E. Price dere.
Davidsen, Markus Altena. 2016a. "Site na Star Wars na Jediism: Mmezu nke okpukpe dabeere na akụkọ ifo. "Pp. 376-89, 571-75 na Okwu: okwu okwu okpukpe, nke Ernst van den Hemel na Asja Szafraniec deziri. New York: Ụlọ ọrụ Press University nke Fordham.
Davidsen, Markus Altena. 2016b. "Mmekọrịta Okpukpe nke Echiche Ụgha: Ụzọ Ọgwụgwụ." Religion 46: 521-49. (Bipụtara oghere oghere ma dị na http://dx.doi.org/10.1080/0048721X.2016.1210392).
Davidsen, Markus Altena. 2013. "Ụgha nke dabeere na akụkọ ifo: Ịghọta Ụdị Ọhụrụ na-emegide okpukpe na Fandom dabeere na History." Omenala na Okpukpe: Akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma 14: 378-95.
Jedi Community. 2015. The Jedi Compass: Nakọtara Ọrụ nke Jedi Community. CreateSpace.
Macleod, Opie. 2008. "History nke Jedi Community 1998-2008." Nweta site na http://www.templeofthejediorder.org/media/kunena/attachments/523/h979ab0a.pdf na 4 March 2017.
McCormick, Debra. 2012. "Ihe edozi nke Star Wars: Site na Fans to Followers "Pp 165-84 na Akwụkwọ ntuziaka nke Hyper-real Religions, nke Adam Possamai deziri. Leiden na Boston: Iju.
Moyers, Bill. 1999. "Ihe Echiche Ụgha na Ndị Mmadụ: Mkparịta ụka dị n'etiti Bill Moyers na George Lucas banyere Nzube nke Ike na Ezi Okpukpe nke Star Wars. " Time, April 26. Nweta site na http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,23298-1,00.html na 30 March 2017.
Porter, Jennifer F. 2006. "" Abụ m Jedi ": Star Wars Nkwado, Nkwenkwe Okpukpe, na Nchịkọta 2001. "Pp. 95-112 na Fabanye na ike nke Star Wars Aha: Fans, ngwa ahia, & Ndị nkatọ, nke Matthew Wilhelm Kapell na John Shelton Lawrence dere. New York: Peter Lang.
Possamai, Adam. 2005. Okpukpe na omenala di nma: Akwukwo Nsogbu. Brussel: PIE Peter Lang.
Singler, Bet. 2015. "Ntughari Okpukpe na Ntughari Mgbaghara nke Internet." Pp. 161-78 na Okpukpe na Iwu Pluralism, nke Russell Sandberg deziri. Farnham: Ashgate.
Onye ọbụ abụ, Beth. 2014. "'Lee Mama Ọ Bụ Ezigbo': Ọnụ ọgụgụ ndị UK, Jediism na Social Media." Journal of Religion in Europe 7: 150-68.
Ụzọ nke Jediism. 2010. Nke Ụlọ Nzukọ nke Jedi bipụtara. Nweta site na https://www.templeofthejediorder.org/media/kunena/attachments/523/haab2b3a_2014-11-19.pdf na 4 April 2017.
Trout, Kevin S. (Opie Macleod). 2012. The Jedi Circle: Jedi Philosophy for Everyday Life. Valencia, CA: The Jedi Academy Online.
Onye nlekọta, Matthew T. 2009. Jedi Ntuziaka Ntuziaka: Okwu Mmalite Jedi Knighthood. Rockville, MD: Dreamz-Work Publications.
Williams, Ash, Benjamin-Alexandre Miller, na Michael Kitchen. 2017. "Jediism na Ụlọ Nzukọ nke Jedi Order." Pp. 119-33 na Fiction, Invention and Hyper-reality: Site na omenala mara mma na okpukpe, nke Carole M. Cusack na Pavol Kosnáč deziri. London na New York: Routledge.
Yaw, Adam, ed. 2006. The Great Jedi Holocron. Nweta site na http://ashlaknights.net/support_documents/The%20Great%20Jedi%20Holocron%20-%20By%20Adam%20Yaw%202006.pdf. na 4 April 2017.
Ụlọ ọrụ Ashla Knights. Nweta site na http://www.ashlaknights.net na 4 April 2017.
Church of Jediism website. Nweta site na https://thechurchofjediism.org na 28 June 2017.
Ike Academy website. Nweta site na http://www.forceacademy.co.uk na 14 March 2017.
Ụlọ akwụkwọ Jedi Realist Studies website. Nweta site na http://instituteforjedirealiststudies.org na 4 April 2017.
Ụlọ ọrụ Jedi Church. Nweta site na http://www.jedichurch.com na 4 April 2017.
Ụlọ nsọ nke Jedi Order website. Nweta site na http://www.templeofthejediorder.org 4 April 2017.